Afuna ukukhangula 'ikhabethe lezindebe' ngeNedbank Cup AmaZulu - Impempe
Afuna ukukhangula ‘ikhabethe lezindebe’ ngeNedbank Cup AmaZulu
February 27, 2021 Impempe.com
Umgadli waMaZulu FC, uLehlohonolo Majoro
AmaZulu FC ahlose lukhulu ngeNedbank Cup. Lena yindebe leli qembu laseThekwini elifuna ibe ngeyokuqala ezongena ekhabetheni okuthiwa lifike nabaphathi abasha Osithwini.
Nokho kuzoba wumsebenzi onzima kwazise Usuthu lolukhu luqhathwe namaqembu anzima kulo mqhudelwano afisa ukuwunqoba.
Esigabeni sokuqala, AmaZulu ayethwele uthayela kunomoya ebhekene nomkhaya iLamontville Golden Arrows abaze bayiqhelisa endleleni kumaphenathi.
Kukokhu bazophinde badinge ukukhipha wonke amangwevu ukudlula kwiBlack Leopards engayihleki into engahlekisi kulezi zinsuku. Bazobhekana nayo eThohoyandou Stadium ngoMgqibelo ntambama.
Nokho umdlali owasindisa Usuthu selumuka nomfula kwi-Arrows, uLehlohonolo Majoro, unethemba lokuthi bazokwazi ukususa iLidoda Duvha endleleni yabo.
“Yize iLeopards ile ezansi (kwiligi) kodwa umdlalo wendebe lona, wehlukile. Futhi njengoba bewinile nje kuleli viki, bazobe begcwele ukuzethemba,” kusho uMajoro. ILeopards ivuke indlobane kungazelele muntu ishaya i-Arrows ngo 2-1 emdlalweni weDStv Premiership ngoLwesibili.
“Futhi njengoba benomqeqeshi omusha nje, kusobala ukuthi wonke umdlali ufuna ukuziveza kuye kanti lokhu kuzokwenza bafake umfutho owedlulele.
“Kodwa ngiyalithemba kakhulu iqembu lethu. Sisenza kahle kulezi zinsuku futhi sinalo lonke uhlobo lomdlali oluzokwazi ukubhekana nanoma yiyiphi inselelo ezofika neLeopards,” kuchaza yena.
Ujabule nangendlela abazilungiselele ngayo. Uthi wonke umdlali uzimisele futhi noma ngubani ozonikwa ithuba ngeke alenzelele phansi iqembu.
“Wonke umdlali uwubheke ngabomvu lo mdlalo. Lo mdlalo ubaluleke ngokufanayo neyeligi… uma ngibheka isibalo sabadlali esinabo eqenjini, leli yithuba lo mqeqeshi lokuthi ashintshe iskimu, anike cishe wonke umdlali ithuba.
“Ngikholwa wukuthi umdlali nomdlali uyadinga ukuba semuzweni owodwa nabanye ngoba uma siwina, siwina siyiqembu.
“Kuba nomuzwa wenjabulo eqenjini uma liwina kanti sifuna ukuwugcina lo muzwa. Uma ngibheka indlela esizilolonga ngayo, indlela esizinikela ngayo… Angingabazi ukuthi siya kude,” kusho uMajoro.
Previous Previous post: Iqede irekhodi iTshakhuma iguqisa iSwallows
Next Next post: Amahlebezi ngekusasa likaBarker kwiStellenbosch kubonakala owayeqeqesha iChiefs eKapa